Naajeeriyaatti rasaasni akka tasa dhuka'e gaazixeessaa galaafatte - BBC News Afaan Oromoo
Magaalaa gudduu Naajeeriyaa Abujaatti gaazexeessaa walitti bu'insa miseensota garee deggertoota warra Shi'aa Iraaniifi humnoota nageenyaa gidduutti uumamee ture dirreerraa gabaasaa jiru rasaasni tasaa galaafatte.
Gaazexeessaan Piriishiyes Owolaabii jedhamu umuriin isaa ganna 23 ta'e kun walitti bu'insa sana kallattiidhaan TV biyyaalessaaf gabaasaa ture.
Owolaabiin TV sana keessa dirqama tajaajila lammummaa waggaa tokkoo akka seera Naayjeeriyaatti namoota reefuu eebbifamanirraa eegamu ba'achaa jira ture.
Walitti bu'insa uumame sanaan, Komishinarri Itti-aanaa Poolisii Usmaan Umar akka ajjeefamanis gabaafameera.
Sochiin Deggertoota Islaamaa Iraan Naayjeeriyaa (IMN) akka jedhanitti walitti bu'insa uumame kanaan miseensonni isaanii 11 ajjeefamanii kanneen biroo hedduun madaa'aniiru.
Aanga'oonni garuu qondaalli poolisii isaanii tokko ajjeefamuu malee lakkoofsa namoota du'anii hin dubbanne.
Hodoftoonni garee warra Shi'aa dhibbootaan lakkaa'aman daandiitti ba'uudhaan gaggeessaan isaanii Ibraaheem Zakzaakii akka mana hidhaatii gadi lakkifamuuf gaafachaa turan.
Ibraaheem Zakzaakii bara 2015 ture kan to'annaa jala oolfame.
Zakzaakiin waggoota afur dura tarkaanfii mootummaan garee IMN irratti fudhateefi akka garewwaan mirgoota namoomaa jedhanitti miseensota garee kanaa 300 ol ta'an galaafatee booda ture to'annaa jala kan oolfame.
'Giifti dureen sobaa' Naajeeriyaa keessatti to'atamte
Biyya dargaggeettii jaarsoliidhaaf kennamte
Aanga'oonni Naayjeeriyaa ammoo ajaja mana murtii akka inni gadi dhiifamu ajaju diduu isaaniitiin qeeqamaa jiru.
Haalli Abujaa keessa jiru amma tasgabbaa'eera. Garuu wal-gaarerfannaan aanga'ootaafi miseensota IMN gidduu jiru ammallee furmaata waan hin argatiin jiruuf gareen kun hanga gaggeessaan isaanii hiikamutti daandiitti ba'anii murmuu akka itti fufan dhaadachaa jiru.
Naayijeeriyaa: Leegoos hijaaba mana barumsaa keessatti dhowwamee ture kaaste
Tajaajilli Tikaa Naajeeriyaa 'Giifti-duree sobaa' to'annaa jala oolchan
Xalayaa Afriikaa irraa: Naajeeriyaa - biyya dargaggeettii jaarsoliidhaaf kennamte